Marvel စတူဒီယိုမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 118 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Dc, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, အဆိုပါ Batman, Thor, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, Wolverine
Lego Marvel Thor နှင့် Black Panther တို့သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်ကောလာဟလများထွက်သည်
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 125 Views စာ0မှတ်ချက် Black က Panther, ထာဝရက Black Panther Wakanda, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလ, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, Thor ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မိုးကြိုး
နောက်ထပ် Lego Marvel Thor: Love and Thunder နှင့် Black Panther အတွက်ကောလာဟလများသည် Wakanda Forever ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူရှိသည်
09 / 10 / 2021 09 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 140 Views စာ0မှတ်ချက် အဲဖရက်, Alfred Pennyworth, အန်ဒီ Serkis, Black က Panther, Gollum, Lego, Lego မှ marvel, lego minifigure, Lego Minifigures, Lego Star Wars, လက်စွပ်၏သခင်ဘုရား Lego, Marvel, Marvel စတူဒီယို, အသေးစား, သေးသေးလေး, မီးခိုး, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, အဓိပတိခေါင်းဆောင် Snoke, နောက်ဆုံး Jedi, လက်စွပ်၏သခင်, Ulysses Klaue
01 / 10 / 2021 26 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 126 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 59 Views စာ0မှတ်ချက် 76145 ထာဝရ '' ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှု, 76154 Deviant ကင်းတပ်, Arishem ရဲ့အရိပ်ထဲမှာ 76155, 76156 ဒိုမို၏ထ, 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, 76237 Sanctuary II ကို, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, နိစ္စထာဝရ, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Lego Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel, Marvel နိစ္စထာဝရ, Marvel စတူဒီယို, Sets အသစ်များ, အောက်တိုဘာလ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
18 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 146 Views စာ 1 မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76100 တော်ဝင် Talon တိုက်လေယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Black က Panther, အုတ်ခဲ, Killmonger တဲ့, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, အလယ်တန်းစျေးကွက်, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
05 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 215 Views စာ0မှတ်ချက် 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, ရွံရှာဖွယ်, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Wong က
04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 208 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum, ၇၆၁၀၈ Sanctum Sanctorum Showdown, 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, Reddit, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
03 / 09 / 2021 03 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 252 Views စာ0မှတ်ချက် 30454 Shang-Chi နှင့်မဟာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, ရုပ်ရှင် - တိကျမှန်ကန်မှု, Polybag, Shang-Chi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, superhero